Igama lesiNgisi elithi "Spot" ngokwezwi nezwi lisho - 'indawo'. Ngakho-ke, "e Spot" kusho "esikhundleni", kanye nemakethe indawo yilapho wenze ukuthengiselana esheshayo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi i-trade izimpahla, izakhiwo kanye nezici okuyizinto eyaziwayo. Lo mkhiqizo kumele zenziwe zilandele izilinganiso kunoma iyiphi ingxenye yaleli zwe. Umqondo ungazange ukudanisa - abathengisa indawo emakethe lwemali, amatshe ayigugu, amatshe, okusanhlamvu, inyama, igesi, uwoyela nezinye izinto eziya, "owokuqala" kunesidingo.
Yiqiniso, ngamunye wabo babeqoqana endaweni ethile. Ukuhwebelana ehlukahlukene yezezimali asetshenziselwa ukudayiswa kanye exchange of zezimali zikazwelonke. Ngo-auction abathintekayo:
Abahwebi -torgovtsy abahola ukudayiswa kanye exchange of lwemali, ezisebenza nezinzuzo zazo siqu.
Brokers - abantu abasebenza "egameni kanye egameni" engena ukuthengiselana egameni besithathu.
Ingabe konke ngesikhathi
Ngamagama yokukhokha, futhi ukulungisa exchange rate ehilelekile ukuthengwa nokudayiswa ukuthengiselana zihlukaniswe amaqembu amathathu:
Inkokhelo ngosuku (Tod kusukela English namuhla - namuhla).
Inkokhelo ngosuku olulandelayo (TOM - kusasa, kusasa).
Usuku emva isiphelo sesimiso kuthengiselana.
Spot igolide emakethe ngaphandle amanani emakethe futhi izibambiso lingaphansi ashukumisayo kodwa eziqinile, ngakho izinga legolide akuyona njengoba okusezingeni eliphezulu, kodwa okungenani esitebeleni. Lwemali kuzuba ngenxa yokuthi ukuthi kazwelonke lwemali kanye isitokwe corporations nivame yezakhi zezombusazwe.
Nasi isibonelo. Manje kwakukhona isimo nge esikweletini US kazwelonke. okuzenzakalelayo lobuchwepheshe kungenjalo emakethe endaweni ngokushesha aphendule ukuwa ziphoqa kanye namanani kaMgcinimafa i-Federal Reserve System of the USA, kodwa igolide uhlale ngentengo. Ngaphezu kwalokho, akubona bonke abahlanganyeli emakethe abasebenza kulo mkhakha ngezinhloso zokucabangela (ukuthi bathenge izimpahla ngentengo ephansi, ngakho emva kwesikhashana ekubonile ezibizayo). abadlali abaningi amakontileka izidingo ukukhiqizwa (imithi, electronics, ubucwebe umkhakha).
Igesi yemvelo ikakhulukazi okuthengiswa emakethe phambili (lapho izinkontileka namuhla, futhi ukulethwa kwezimpahla senzeka esikhathini esizayo), igesi emakethe indawo incane ivolumu. Ukuze ukuthengiselana iphendukele lapha isimiso "Vimbela ngaleso sikhathi." Amanani bokumisa ukukhiqizwa igesi ye eduze North Sea ukuba amanani Gazprom ukuze imikhiqizo adayiswa ikusasa izinkontileka. Lokhu kuzoholela ukwanda yokuthengisa amavolumu gas Russian eYurophu.
Ukuze ukuthenga imikhiqizo (okusanhlamvu, inyama, ushukela) ikakhulukazi isebenzisa exchange phambili (lapha kungenzeka ukuba isivumelwano nokulethwa kakolweni, okuyinto engazange lenyuke). Imakethe indawo kulabo abaye miscalculated izidingo zabo noma ayengeke azigcine amasheya.
Omunye kunazo wadalula ukuthi izimo - kwenkululeko ukukhiqizwa umkhakha Metallurgical. Metalsea Inkomba (ekubaleni yayo kusho izibalo uhlu oluthile imikhiqizo izigaba ezintathu intengo: kusuka 1 ton, amathani 5, amathani 20, zihlukaniswe 100) izinyanga ezimbalwa masonto onke luyanda, ngemva kwalokho lawela phansi. Izigigaba ezisanda kwenzeka eSiriya ukusabela ezihambisana yabaholi bomhlaba, okuthiwa ku izimakethe endaweni Dynamics ezimbi.
Amaqhinga wokubuthelela yokuthengisa okwandisa